WAXAAN QABANQAABIYAA KULEYLKA KULEYLKA: KULULEEYAHA CASRIGA, KULEYLKA KULEYLKA, BIYAHA IYO KULEYLKA KULEYLKA - DHISMAYAASHA
Xarumaha aqalka dhirta waxaa loo isticmaali karaa oo keliya guga hore ama xilliga dayrta si loo kordhiyo shaqada beerta. Waxa ugu muhiimsan waa heerkulka saxda ah ee lagu koriyo ee xilliga qaboobaha.
Goobaha jilicsan ee loo qaabeeyay oo si wanaagsan loo sameeyey oo loogu talagalay koriyo ayaa si buuxda loogu isticmaali karaa xilliga qaboobaha. Ku filan taas samee rinjiga iyo qabanqaabiyo kulaylinta hufan.
Hababka caadiga ah ee lagu hayo heerkulka
Hababka dhaqameed ee kuleylka lagu koriyo waxaa ka mid ah hawo kulul iyo biyo. Nidaamka kuleylka hawadu wuxuu u wareejiyaa kuleylka dhirta sababtoo ah hawo goyska.
Faa'iidadiisa waa heer kulul oo aad u sareeya ee mugga dhamaan qolka. Si kastaba ha noqotee, marka la joojiyo kuleyliyaha hawada heerkulku aad buu u dhacaa.
Sida qalabka kuleylka hawada kuleylka loo isticmaalo qoryaha kuleylka naqshado kala duwan. Iyada oo ah ilka tamarta caanaha noocan oo kale ah waxay isticmaali karaan dareerayaal ama koronto.
Noocyo badan ayaa lagu qalabeeyaa fan ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad si deg deg ah u buuxiso qolka hawada kulul.
Intaa waxaa dheer, nidaamyada kuleylka kuleylka ah ee qaabka kuleylka ah ee tuubbo bir ah ma luminayaan caannaanta. Dhammaadkeeda sare waxay u dhigantaa dhinaca bidix waxayna leedahay furitaan badan oo loogu talagalay marinka hawada kulul.
Dhamaadkiisa hoose wuxuu ku yaalaa wadada waxaana lagu rakibaa maskax ahaan. Dab ayaa lagu sameeyaa gambaleelka qaybta qiiqa ee tubada, hawada kululna waxay bilaabmaysaa inay qolka ku dhex socoto tuubooyinka.
Kuleylka biyaha Waxay u shaqeysaa iyada oo bixisa biyaha kulul ee nidaamka tuubooyinka iyo radiators lagu dhigo aqalka dhirta lagu koriyo. Faa'iidada waa awooda kuleylka weyn, taas oo u ogolaaneysa biyaha kulul inay sii daayaan kuleylka waqti dheer xitaa ka dib marka qalabka kululaynta la demiyo. Iyo sidoo kale xaqiiqda ah in ay suurtagal tahay in la sameeyo kuleylka kuleylka ah ee lagu koriyo gacmahaaga.
Khasaaruhu waa kakanaanta xisaabinta awoodda kululeeyaha, iyo sidoo kale lambarka iyo astaamaha radiators. Waxay xoojisaa shaqada iyo qadarka qalabka muhiimka ah ee aan lahayn kharashka ugu hooseeya.
Kuleylka biyaha waxaa loo isticmaali karaa kuleyliyeyaasha ku shaqeeya nooc kasta oo shidaal ah:
qoryaha ama dhuxusha;
Kuleylka gaaska waxay ku lug leedahay qaab-dhismeedka gaasta kuleyliyaha.
Waxaa loo samayn karaa labo siyaabood: adoo saaraya dhuumaha gaaska iyo isticmaalka dhululubada gaaska.
Habka labaad, i.e. isticmaalka dhululubada, waddanka iyo shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed waxay u badanyihiin inay noqdaan mid caqli-gal ah.
Uma baahnid wax badan oo shaqo ah oo ku saabsan dhuumaha dhuumaha iyo ogolaansho badan.
Isticmaalka dhuunta gaaska dabiiciga ah ayaa faa'iido leh marka kiiska la geynayo marka gaaska la diyaariyo horay loo qorsheeyay xagaaga ama dhismaha guryaha.
Nidaamka kuleylka kuleylka ayaa lagu kala saari karaa iyada oo la raacayo habka kuleylka tamarta kulaylka:
kuleylka kuleylka biyaha;
Ilaha kuleylka tuubooyinka kuleylka biyaha Waxay u taagan tahay kuleyliyaha gaaska. Helitaanka ruqsadda rakibidda qalabkan iyo hawlaha rakibida dhabta ah waa tallaabooyin qaali ah.
Caawimaad:Xulashadani waxay faa'iido u leedahay kiiska marka ay jirto fursad ah in la dhigo kuleylka ugu weyn kuleylka kuleylka biyaha kuleyliyaha ah ee dhismaha hoyga.
Kuleyliyaha gaasta ee casriga ah shucaac ka soo baxa shucaaca infrared ka soo baxa dusha sare. Noocyada noocan oo kale ah waxay ku jiri karaan qaabka tuubooyinka, ha ahaato midab ama dhejis. Si kastaba ha noqotee, gaasku wuxuu ku dhacaa gudaha qalabka. Si kastaba ha noqotee, waxay yeelan doonaan hababka kala duwan ee qiiqa.
Heerkulka Tufaaxa waxay u baahan yihiin inay dhisaan shooladooda. Qeybaha kala duwan ayaa laga yaabaa in ay si toos ah u soo saaraan waxyaabaha dhinacyada kululeynta lagu koriyo ka dibna ka saaraan nidaamka hawo-qaadista, taas oo marmarka qaar aaney ammaan ahayn.
MUHIIM: Haddii aan lahayn nidaam hawo gaaban, isticmaalka qalabka gaaska waa wax aan la aqbali karin. Haddii dhammaan oksijiinta lagu gubo qolka, gubashada ayaa joojin doonta qolka waxaa laga buuxin karaa gaasta qarxa.
Kuleyliyaha gaasta hawada leedahay gubane furan. Cimilada kuleylka ah ee kululeeyaa waxay kor u qaadaysaa saqafka, laga bilaabo halka loo qaybiyo mugga oo dhan inta uu qaboobo.
Nidaamkan kuleylka waa mid aad waxtar u leh, laakiin si loo ilaaliyo ololka iyo u hoggaansamaan sharciyada badbaadada, aqalka dhirta lagu koriyo waa in uu lahaado hannaan firfircoon.
Kuleylka kuleylka kuleylka. Tilmaamahan, kuleyliyaha gaasta hawada waxaa lagu daray qalab koronto. Tani waxay si weyn u kordhineysaa waxtarnimada, laakiin waxay u baahan tahay isku xirka khadka korontada.
Kuleylka korontada, iyo sidoo kale nalalka lagu koriyo oo loogu talagalay kuleylka, waa habka farsamada ugu fudud ee kuleylinta. Waxaa lagu fulin karaa qalab labo nooc ah.
Qoryaha kulaylka ee korontada. Hawada waxaa lagu kululeeyaa iyaga oo gacan ka helaya silsilado xarko leh oo leh caabba adag, taageere ayaa lagu rakibay qoraxda kuleylka, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa in kuleylka hawada ee qolka waqti gaaban.
Cashuurta. Kuleylku wuxuu ku dhacaa gudaha qalabka. Tamarta kuleylka ayaa lagu gudbiyaa iyada oo loo marayo biraha ama shidaalka saliidda dibedda. Dhamaan fududaynta xalkaan, isticmaalka qalabka korontada ku shaqeeya ee lagu koriyo ma aha mid faa'iido leh, maaddaama xaaladaha qoyaan badan ay nolosha qalabku aad u yaryihiin.Intaa waxaa dheer, qalab kulul oo dabiiciga ah leh waxay leeyihiin heer sarreeya isticmaalka korontada.
Kuleylka alwaaxa aqalka. Si aad u qalabayso nidaam la mid ah kuleylka qaboobaha waa mid aad u fudud. Caadi ah oo la yaqaan dhammaan cunto kariyaha ee lagu koriyo ayaa caawin doona. Faa'iidada fursadani waa qiimaha yaryar ee shidaalka iyo waxtar sareeya.
Faa'iidada kariyaha karraa waa ololi kara. Goobta rakibida qalabka waa in lagu daboolaa walxaha aan guban karin. Intaa waxaa dheer, rinjiga loo baahan yahay iyo shooladda at barta laga soo saaro saqafka.
Fiiri sawirka: kululeeyaha kulaylka ah ee kuleylka, kuleylka korontada ee kuleylka iyo kuleylka hawada
Hababka casriga casriga ah
Dhawaan, ee dhaqaalaha aqalka dhirta lagu koriyo iyo nidaamyada kuleylka, ayaa hore loogu isticmaalay oo keliya dhismayaasha la deggan yahay. Mid ka mid ah tusaalayaashu waa kabid kuleyl oo loogu talagalay koriyo, qolalka waxaa loo isticmaalaa in lagu rakibo kuleylka hawada.
By virtue fiilada kuleylka kuleylka waa habka ugu fiican ee kuleylka - iyada oo loo marayo kuleylka carrada. Halkan, marka hore oo dhan, dhulka waa kulul, taas oo si fiican u saameey waxqabadka muhiimka ah ee nidaamka xididka dhirta.
Caawimaad: kuleylka aqalka dhirta kor loo qaado ayaa ah midka ugu wanaagsan ee tamarta, tan iyo hawada diiran maaha in ay wareegto mugga oo dhan qolka, sida kiiska noocyada kale ee qalabka kuleylka.
Faa'iidada kale ee kuleylka kuleylka - iswaafajinta nidaamka. Hermetically packed cable for kuleylka carrada waxaa si toos ah u dhigtaa oo ma cuno ilaa meel ka mid ah qaab dhisme.
Kuleyliyaha korontada ee korontada - hal mar oo cusub oo loogu talagalay isticmaalka gudaha. Waxaa lagu dhejiyaa derbiyada ama salka hoose. Guryaha kuleylka kuleylaha ayaa kor u qaada caanaha oo kordhay taasna waa sababta.
Shucaaca Infrared oo ka soo jeeda kuleylka kuleylka kulul ayaa labadaba derbiyada iyo dhulka, iyo sidoo kale dhirta naftooda. Faa'iido la'aanta xalkani ma aha waxtarka ugu sarreeya.
Waxaa sidoo kale jira habka sida loo isticmaalo xargaha kulaylka: saarista cajaladda kuleylka. Iyada oo la mid ah mabda'a telefoonka ee hawlgalka iyo meeleynta lagu koriyo, kululeeyayaasha cajaladuhu way ka duwan yihiin naqshadeynta sababtoo ah waxay ku sameeyaan qaabka koollada ama xayawaanka.
Habka kululaynta iyadoo la adeegsanayo nalalka korontada ee korontada ku shaqeeya ayaa sidoo kale la aqbali karaa.
Marka lagu daro kulaylka, nidaamka noocan oo kale ah wuxuu soo saari doonaa dheecaan iftiin leh, taas oo aad u faa'iido leh dhirta xilliga jiilaalka. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka tamarta ee kiiskan waa mid aad u muuqata.
Goobaha kuleylka kuleylka ah. Waxay ku saleysan tahay xaqiiqda ah in qoto dheer oo heerkulku yahay mid xasilloon inta lagu jiro sanadka oo dhan mar walbana waa fiican yahay.
Si kulaylka loo gaarsiiyo gudaha gudaha aqalka dhirta lagu koriyo, bambooyin kulul oo gaar ah ayaa la isticmaalaa, biyo ama hawo bam. Qaboojiyaha qaboojiyaha ee la isku duro ee hoose ee dhulka hoostiisa ah ayaa kor u kacaya, kor u kaca dibna u bixiyaa tamarta kulul ee macaamiisha.
Faa'iidooyinka kululeeyaha tamar-dhuleedka waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Kharashka tamarta ee ugu yar, lagama maarmaanka u ah si loo xaqiijiyo wareejinta qaboojiyaha;
nolol wakhti dheer oo adeegyo ah oo dhowr sano ah;
Ku dhawaad ​​uma baahna dayactir;
maalmo aad u kulul, nidaamka, iyada oo aan wax isbaddel ah, wuxuu awoodaa inuu u dhaqmo sida qaboojiyaha loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo.
Dhibaatada ugu weyn ee nidaamka tamar-dhuleedka waa kakanaanta naqshadeynta iyo shaqada sahaminta iyo xisaabinta farsamada. Intaa waxaa dheer, in la diyaariyo kuleylka la midka ah ayaa laga yaabaa inaanay ku jirin dhammaan noocyada carrada.
Sidee loo kululeynayaa qiimaha kuleylka ah
Doorashada habka ugu jaban ee kuleylka waxay ku xiran tahay dhowr arrimood. Marka hore, laga bilaabo u diyaargarowga xisaabinta dhismaha culculus iyo dhismaha miisaanka. Xaaladdan, ikhtiyaarka ugu fiican waa kuleylka biyaha kulul.
Marka labaad helitaanka gaasta ee goobta. Haddii la heli karo, markaa kuleylka kuleylku wuxuu noqon doonaa kii ugu jaban.
Seddexaad kharashka shaqada on rakibidda habka kuleylka iyo dayactirka. Haddii aad qorsheyneyso inaad wax walba ku sameyso gacmahaaga oo bilaash ah, markaa waxa macquul ah in aad doorato kuleylka korantada.
Ma aha wax aad u adag in la abaabulo waxqabad, jaban mana aha kuwa ugu adag inay ku shaqeeyaan nidaamka kuleylka. Waa ku filan inaad barato mabda'a xalka ugu caansan, tixgelinta awooddooda gaarka ah waxayna doorataa in ay noqon doonto kululeeyaha casriga ah ee lagu koriyo, laydhadhka casriga ama kululeeyaha cajalad.